Barashada Mashiinka - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Mobile, Falanqaynta
waxbarashada Machine waa ku -dhaqanka falanqaynta xogta oo farsameyneysa qaab dhismeedka gorfeynta. Mashiinka barashada oo si joogto ah u sii wata barashada si uu ficilkiisu u ahaado mid sax ah iyo fahanka cusubi waa run barashada mashiinka nidaamka. Xogta waxaa la geliyaa mashiinka barashada iyadoo la adeegsanayo ficil kasta iyo quud aan ficil ahayn ka dibna hawsha si otomaatig ah ayey u socotaa iyada oo aan si joogto ah looga baahnayn faragelinta dadka ama gacanta. waxbarashada Machine waxay u oggolaatay kombiyuutarrada inay helaan aragtiyo qarsoon, iyagoo adeegsanaya algorithms -ka oo si isdaba joog ah uga hela xogta la siiyay, iyada oo aan si cad loo qorsheynin halka laga eegi doono. waxbarashada Machine wuxuu daaha ka qaadi karaa xeelado cusub iyo wax soo saar nidaamyo kala duwan oo ay ku jiraan IT, daryeelka caafimaadka, saadka, tamarta iyo xitaa waxbarashada. Heerar wax-ku-ool ah oo aan hore loo arag ayaa lagu gaadhi doonaa nidaamyada ganacsiga ee algo-ga is-barasho, iyo heer shaqsiyeed, aaladaha caqliga lihi waxay dhab ahaantii na toosin doonaan wax walba waxayna gacan ka geysan doonaan fududeynta nolosheena. waxbarashada Machine waa saynis aan haba yaraatee ahayn laakiin hadda helaya dardar cusub.
Horumarinta Barashada Mashiinka
Caqabad ku wareegsan geeska ayaa ah in mashiinadani ay si dhab ah wax uga qaban karaan xogta aan habeysneyn oo habeysan iyo marka la helo algorithms tayo leh. Hadday sidaas sameeyaanna, natiijooyinka waxay noqon doonaan wax aan la qiyaasi karin. Kaliya waan saadaalin karnaa heerka isbeddelada dhici lahaa, isbedelka dhabta ah ayaa xusid mudan. Laakiin waxaas oo dhami hubaal waxay u baahan yihiin waqti aad u fara badan oo lagu qabanayo.
waxbarashada Machine maanta ma ahan sidii hore oo kale, iyada oo ay ugu wacan tahay teknoolojiyadda cusub ee xisaabinta. Maaddaama moodellada ay la kulmaan xog cusub, dhinaca soo noqnoqodka ah barashada mashiinka aad bay muhiim u tahay maadaama ay awoodaan inay si madax bannaan ula qabsadaan. Waxay soo saaraan natiijooyin lagu celin karo, lagu kalsoonaan karo iyo go'aamo iyagoo wax ka baranaya xisaabinta hore loo siiyay. waxbarashada Machine wuxuu ka dhashay fikradda ah in kombiyuutarradu awood u leeyihiin inay wax bartaan iyagoon si dhab ah loogu qorsheynin hawl kasta oo gaar ah oo ay ku shaqeeyaan, taasi waa aqoonsiga qaab -dhismeedka iyo cilmi -baarayaashu waxay sameynayaan habab si loo arko haddii kombiyuutarrada ay wax ka baran karaan xogta sirdoonka macmal. Dadku waxay soo nooleeyeen xiisihii barashada mashiinka sida falanqaynta Bayesian iyo macdanta xogta dhowr arrimood sida kaydinta xogta la awoodi karo, farsamaynta xisaabinta ka xoog badan oo ka jaban iyo noocyo sii kordhaya iyo tirada xogta la heli karo. Dhammaan waxyaalahan ayaa suurtogal ka dhigay in si toos ah oo degdeg ah loo dhiso moodallo kuwaas oo falanqayn kara xog aad u adag oo ka weyn oo keeni kara natiijooyin sax ah oo degdeg ah oo baaxad weyn haddii loo baahdo. Abuuritaanka moodallo sax ah, ganacsiyada iyo ururadu waxay haystaan ​​fursad wanaagsan oo ay ku aqoonsadaan fursadaha faa'iidada leh iyo kuwa guuleysta oo ay yareeyaan khatarta barashada mashiinka qayb muhiim ah oo ka mid ah warshadaha asaasiga ah.
waxbarashada Machine Waxay sahlaysa nidaamyada garashada si ay nooga qaybgalaan, uga fikiraan oo ay nala bartaan si shakhsi ah oo dabiici ah. Ka fakar ganacsiyada saamiyada, talooyinka filimada Netflix, xayaysiisyada intarneedka ee soo baxa iyadoo ku saleysan caadooyinka wax raadinta - kuwani waa dhammaan tusaalooyinka sida barashada mashiinka waxay naga caawinaysaa inaan aduunka u sahamino siyaabo awood leh oo hal abuur leh. Hadda ka hor, isbeddelka taariikhda bini'aadmigu waxa uu ahaa kacaankii warshadaha oo u sahlay warshadaha in ay abuuraan shaqooyin badan iyaga oo wax soo saar badan leh oo kor u qaadaya heerka guud ee nolosha. Maanta, barashada mashiinka waa kacaan kale oo noocaas ah oo adduunku wajihi doono. Waxaan qarka u saarnay automation-ka iyo sirdoonka macmal Ahaanshaha ciyaaryahanka ugu muhiimsan iyo haddii si sax ah wax loo qabto, barashada mashiinka waxay ka caawin doontaa shirkadaha inay koraan ganacsigooda oo ay horumariyaan fikrado isla markiiba. Sida Kacaankii Warshadaha, qaybta muhiimka ah ee barashada mashiinka Waa wada shaqayn- waxaan u baahan lahayn shaqaale ka caqli badan si wadajir ah oo ka shaqeeya geeddi-socod guul leh oo bixiya wax soo saarka saxda ah. Xoogsatada halkan looga hadlayaa waxay lahaan doonaan injineerada xogta, naqshadeeyayaasha IT-ga, isticmaalayaasha ganacsiga, saynisyahano xogta, macdanta xogta khubarada, maamulayaasha nidaamka, maamulayaasha, horumarinta, iwm.
Waxaan si fiican u ognahay barashada mashiinka codsiyada ka socda nolosheena maanta. Muddo dheer, algorithms ee barashada mashiinka way jireen laakiin waxa dhawaan la sameeyay waxay ahayd awooda in si toos ah loogu dabaqo xisaabinta adag ee xogta weyn, si dhakhso ah iyo marar badan. Tusaalooyinka aan hore u naqaannay waxa ka mid ah gaadhiga iswada ee Google-ka, kaas oo si weyn loo buunbuuniyay oo ku salaysan. barashada mashiinka. Waxay leedahay dhammaan sifooyinka baabuur casri ah oo la isku daray sida xakamaynta safarka la qabsiga, baarkinka iyo caawiyayaasha navigator, Aqoonsiga hadalka iyo kaaliyaha haadka ee ka dhigaya meel u dhow baabuur shaqaynaysa oo madaxbannaan. Sidoo kale talada online waxay bixisaa sida kuwa ka Netflix iyo Amazon, ogaanshaha khayaanada iyo isku darka barashada mashiinka iyada oo la abuurayo xeerar luqadeed si loo ogaado waxa ay macaamiishu kaa sheegayaan Twitter, Nanotronics, oo otomaatig u ah mikroskoobyada indhaha si loo hagaajiyo kormeerka, Dib u eegista Robotics iyaga oo isticmaalaya si ay u hagaajiyaan xawaaraha wax soo saarkooda oo ay u tababaraan hubkooda robotka, kordhinta saxnaanta kala qaybinta macaamiisha, saadaalinta qiimaha nolosha macaamiisha , wanaajinta khibrada isticmaalaha gudaha abka, ogaanshaha qaababka wax iibsiga macmiilka, qiimaynta khataraha caafimaadka, hagaajinta daryeelka gaarka ah, iyo ogaanshaha cudurada si sax ah waa dhammaan sawirada maalinlaha ah ee barashada mashiinka.
wanaagsan A barashada mashiinka nidaamka waxaa abuuray algorithms aasaasiga ah iyo horumarsan, scalability, awoodaha diyaarinta xogta, qaabaynta kooxeed iyo automation iyo habraacyada soo noqnoqda. waxbarashada Machine waa beryahan wax badan oo war ah sababtoo ah horumarkeeda "waxbarashada qoto dheer"taas oo ay ku jirto guuldaradii AlphaGo ee caanka ah ee Go grandmaster Lee Sedol iyo alaabooyin kale oo cusub oo cajiib ah oo ku wareegsan turjumaadda mashiinka iyo aqoonsiga sawirka. waxbarashada Machine isticmaala xaddi badan oo xog ah, waa ka cafis badan beddelka dhibcood xogta ama xuduudaha iyo taageertaa kakanaanta weyn iyo kala duwanaansho. Wax soo saarka la soo saaray ee hababkan waxaa si aan kala go 'lahayn loogu dabaqi karaa meelo kala duwan oo kala duwan, sida hababka falanqaynta, daruur Kombuyuutarada, shabakadaha cidhifyada iyo nidaamyada ku dhex jira. Talaabada isbeddelka ah ee laga soo bilaabo waagii ay fikraduhu inta badan ahaayeen madal tignoolajiyada-u dhaqaajisay xilli garaadka, taas oo suurtagelinaysa fikrado ganacsigu hoggaamiyo. waxbarashada Machine, IoT iyo AI waa nooc isku xidhan. IoT si qurux badan ayey u dhameystirtay sirdoonka macmal marka ay timaaddo xisaabinta waqtiga-dhabta ah. Aadanaha ayaa si dhakhso ah loogu beddeli doonaa mashiinno socod oo aad uga caqli badan annaga. Mashiinnadu waxay durba bilaabeen inay ku dhex milmaan meheradaha ujeeddooyin kala duwan iyo waqtiga soo socda, waxaan arki doonnaa mowjad is -beddel farsameysan oo nolosheenna maalinlaha ah u wareejineysa. Diinamooyinkan bani'aadamku waxay beddeli doonaan hababka aan u jeedno xagga nolosha iyagoo ka dhisaya garashada xogta ay helaan iyo hababka aysan bini'aadanku weligood awoodin. Tani waxay ka dhigan tahay in mashiinnadu dhab ahaantii ka badin doonaan xoogga aadanaha ku dhawaad ​​wax kasta oo keenaya isbeddelka geeddi -socodka, keydinta qiimaha iyo heerarka waaweyn iyo kuwa ka sii weyn ee otomaatiga. Nidaamyada aqoonsiga muuqaalka iyo codka ayaa aqoonsanaya shaqsiyaadka ku kala jira kanaallo kala duwan sida ku cad sahan, shirkadaha sida dhaqsaha u koraya waxay yeelan doonaan mashiinno ka caqli badan shaqaalaha.
Qaabka Soosaarayaasha ML
Asal ahaan waxa jira saddex nooc oo kala duwan barashada mashiinka kuwaas oo la kormeero, aan la ilaalin, iyo xoojinta barashada. Kuwaas waxaa la doortaa iyadoo ku xidhan hawsha dhamaystirka iyo fududaynta hawsha. Barashada la kormeero, algorithm -ka barashada ayaa durba la siiyay jawaabta inta la akhrinaayo xogta ah natiijada saxda ah ee dhibic kasta oo xog ah ayaa si cad loo calaamadeeyay markii la tababarayo tusaalaha. Waxay doonaysaa inay hesho xiriirka halkii ay ka heli lahayd jawaabta si ay si sax ah u saadaaliso ama u kala saarto dhibcaha xogta marka dhibcaha xogta aan la qoondeyn la bilaabo. In Barashada aan la ilaalin, algorithm -ka barashada lama siinayo jawaabta inta lagu jiro tababarka qiimihiisuna wuxuu ku jiraa helitaanka isku xirnaanta iyo qaababka. Waxay ujeeddadeedu tahay in la helo xiriir macno leh oo u dhexeeya dhibcaha xogta. Nooca ugu dambeeya waa barashada xoojinta oo ah isku dhafka u dhexeeya barashada kormeerka iyo kormeerka. Waxay ubaahantahay isku xirnaanshaha deegaanka waxaana loo isticmaalaa in lagu xaliyo mashaakilaad ka adag kuwii hore. Tusaalooyin yar oo caan ah ayaa ah dib-u-heshiisiin, turub, iyo Go, waa ciyaaraha macquulka ah iyo xogta waxaa bixiya deegaanka si wakiilka ugu oggolaado inuu uga jawaabo oo uu keligiis wax u barto.